घरमा सुख-शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रवार गर्नुस माता लक्ष्मीको यी उपाय - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»घरमा सुख-शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रवार गर्नुस माता लक्ष्मीको यी उपाय
By दिपेश बिष्ट on २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार १०:५२ धर्म/दर्शन
पिएनपिखबर। घरमा सुख-समृद्धि बनाइ राख्नको लागी देवी लक्ष्मीको पुजा भगवान बिष्णुको साथमा गरिरहनु पर्छ। ज्योतिषका अनुसार हप्ताको सातै दिन अलग-अलग देवी-देवताहरुसंग सम्वन्धित छन्। शुक्रवार देवी लक्ष्मीको बिशेष पुजा गरिन्छ। महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नाको लागी शास्त्रमा धेरै उपाय बताइएको छ। यी उपाय मध्य केहि उपाय यस्ता छन् जुन बिशेष गरी हरेक शुक्रवार गर्नुपर्छ।
यस्ता छन् ति ३ उपाय
महालक्ष्मीको साथमा भगवान बिष्णुको पनि पुजा गर्नुपर्छ। पुजामा दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र पनि राख्नुस। पुजा सकिएपछि यी चिज घरको दराजमा राख्नुस। त्यसपछि जब पनि लक्ष्मीको पुजा गर्नुहुन्छ तब यी चिजलाई पनि पुजा राख्नुस। – एजेन्सी